Orinasa mpamatsy varahina manary mora vidy | Ouzhan
Ny alimo varahina dia nanjary sokajy roa, dia ny varahina sy ny varahina. Ny varahina dia firaka varahina misy zinc ho firaka lehibe miampy singa mampifangaro.
Varahina vy tsy ferrous maty-manary-fanao marina varahina maty-fanariana faritra
Ao anaty varahina, varahina manganese, varahina vita amin'ny aluminium, varahina silikone, varahina mitarika, sns. Ny firaka varahina izay tsy misy zinc ho singa fototra dia antsoina hoe varahina, toy ny varahina varahina, alimo aluminium, varahina firamainty ary varahina beryllium. Ao amin'ny fenitra nasionaly, misy karazany 9 ny firaka varahina alefa, ao anatin'izany ny naoty 29. Ny fanariana firaka varahina dia karazana fitaovana fanariana firaka ampiasaina amin'ny indostria. Ny alim-by vita amin'ny varahina dia be mpampiasa amin'ny fanamboarana sambo sy ny indostrian'ny simika noho ny fanoherana ny harafesina tsara amin'ny rano mangatsiaka, rano an-dranomasina ary vahaolana simika sasany. Noho ny fahamendrehany tsara sy ny fanoherana ny fitafy, ny alloys mifototra amin'ny varahina dia matetika ampiasaina amin'ny fanamboarana kirihitrala mihetsiketsika ho an'ny milina isan-karazany izay mitondra enta-mavesatra mavesatra haingam-pandeha.
Tombontsoa azo avy amin'ny fanariana vy tsy vy vy:
OEM namboarina varahina non-ferrous vy maty-casting fanompoana-China Shanghai varahina tsy vy-vy vy maty-casting mpanamboatra
Ouzhan dia mpamokatra manambatra indostria sy varotra, manome serivisy fanodinana milina tokana sy milina fanodinana. Araka ny fitakian'ny mpanjifa, ny famonoana varahina matevina avo lenta misy kalitao azo antoka sy azo ianteherana dia azo zahana. Ireo faritra masinina ireo dia amboarina amin'ny alàlan'ny akora faran'izay tsara kalitao, izay azo avy amin'ireo mpamatsy ampahany marim-pototra fanta-daza eny an-tsena. Ny ekipa teknika matanjaka sy matihanina ary ny rafitra fitantanana sy fiasan-tsika mahomby dia afaka miantoka ny famokarana tonga lafatra ny vatan'ny mekanika maty. Ankoatr'izay, ny vokatra vita amin'ny varahina vita amin'ny varahina dia manome fatratra mifanaraka amin'ny fenitra kalitao ary azo ampiasaina amin'ny fampiharana indostrialy isan-karazany. Ary afaka manome serivisy vidin'ny fifaninanana ho an'ny ampahany maty fanariana varahina ho an'ireo mpanjifantsika sarobidy.
Inona no fampiasana ny ampahany maty fanariana varahina?
Tombony amin'ny serivisy fanariana vy any Ouzhan
- Ny vokatra vita amin'ny fanary varahina rehetra dia iharan'ny fanaraha-maso kalitao hentitra.
- Araka ny sary na ny santionany amin'ny fanamboarana ny ampahany maty fanariana varahina.
Previous: OEM mihodina vy mihodina faritra namboarina
Manaraka: Fomba fanariana maty ho an'ny varahina